Raw Ticagrelor ntụ ntụ (274693-27-5) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Ticagrelor ntụ ntụ (274693-27-5)
Rating: SKU: 274693-27-5. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Ticagrelor ntụ ntụ (274693-27-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
A na-eji ntụ ntụ Ticagrelor tinyere ọgwụ aspirin dị ala iji nyere aka igbochi nkụchi obi na ọrịa strok na ndị nwere nsogbu obi (dịka angina na-adịghị agbanwe agbanwe, nkụchi obi gara aga). Enwere ike iji ya iji gbochie nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok mgbe ụfọdụ ịwa ahụ obi (dịka ntinye ọnụ, akwara obi na-agafe graft-CABG, ma ọ bụ angioplasty). Ticagrelor ntụ na-arụ ọrụ site na igbochi platelet ịrapagidesi ike ma gbochie ha ịmalite mkpụkọ na-emerụ ahụ. Ọ bụ ọgwụ antiplatelet. Ọ na - eme ka ọbara na - aga n’enweghị nsogbu n’ahụ gị.
Ticagrelor ntụ ntụ video
Ticagrelor ntụ ntụ isi agwa
aha: Ticagrelor ntụ ntụ
Usoro Molecular: C23H28F2N6O4S
Molekụla arọ: 522.57
Ticagrelor ntụ ntụ ojiji
Ticagrelor ntụ ntụ; 274693-27-5; Brilinta; Nchọpụta; AZD-6140; AZD6140; Brilinta; Nchọpụta; Njikwa;
Ticagrelor ntụ ntụ Usage
A na-eji ntụ ọka Ticagrelor eme ihe na ọgwụ aspirin dị ala iji nyere aka igbochi ọrịa obi na ọrịa strok na ndị nwere nsogbu obi (dịka angina na-adịghị edozi, obi ọgụ na-aga n'ihu). A pụkwara iji ya iji gbochie mmetụ obi ma ọ bụ ọrịa strok mgbe ụfọdụ ọnyá obi (dị ka nsị ọnyá, ọnyá akwara na-agafe aka-CABG, ma ọ bụ angioplasty). Ticagrelor raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na igbochi platelets site n'ịnọkọkọ ọnụ na-egbochi ha ịmepụta akpụkpọ anụ. Ọ bụ ọgwụ mgbochi. Ọ na-eme ka ọbara na-asọgharị na ahụ gị.
Were ọgwụ a na ọnụ ma ọ bụ na-enweghị nri dịka dọkịta gị gwara gị, ugboro abụọ kwa ụbọchị. Were ọgwụ aspirin (dịka 75-100 milligrams) kwa ụbọchị dịka dọkịta gị gwara gị.
Jiri Ticagrelor raw ntụ ntụ dị ka dọkịta gị nyere iwu. Gụọ ozi niile enyere gị. Nhazi ntuziaka nke ọma.
• Were Ticagrelor ntụ ntụ n'otu oge.
• Were nri ma ọ bụ na-enweghị nri.
• Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepu mbadamba mbadamba nkume ahụ, a ga-egwepịa mbadamba nkume ahụ ma jikọta ya na mmiri. Na-aṅụ ozugbo ozugbo agwakọta. Ghichaa iko ahụ na mmiri, nwuo, ma ṅụọ.
• Ndị na-azụ nri mmiri nwere ike iji mbadamba nkume ahụ. Kpochapu mbadamba nkume ma jiri mmiri mee ya. Ghichaa nri nri mgbe e nyere Ticagrelor raw powder.
• Iji nweta uru kachasị mma, egbula azụ.
• Nọgide na-ewere Ticagrelor ntụ ntụ dị ka dọkịta gị ma ọ bụ ndị nlekọta ahụ ike ọzọ, gwara gị, ọ bụrụgodị na ọ dị gị mma.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m na - atụ uche ọgwụ?
• Gbanwee ihe eji emefu ma laghachi azụ n'oge gị.
• Ejila 2 mee ihe n'otu oge ahụ ma ọ bụ mmezi ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị na Ticagrelor ntụ ntụ
Ọgwụ a nwere ike ime ka ọ dị njọ ma na-egbu ọbara mgbe ụfọdụ. Ejila ya ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọbara ọgbụgba (gụnyere ọbara ọnya ọgbụgba) ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị na-agba ọbara na ụbụrụ. Akwụsịla ịṅụ Ticagrelor raw ntụ ntụ n'ekwughị dọkịta gị. Kwụsị Ticagrelor ntụ ntụ mgbe ị na-ekwesighi inwe ike ibute nkụchi obi, ọrịa strok, na ọnwụ. Jiri dika akwara gi.
Gwa ndị niile na-elekọta gị na ị na-ewere Ticagrelor ntụ ntụ. Nke a na-agụnye ndị dọkịta gị, ndị nọọsụ, ndị na-enye ọgwụ, na ndị dọkịta. A ghaghị ịkwụsị ọgwụ a n'ihu ụfọdụ ụdị ịwa ahụ dịka dọkịta gị gwara gị. Ọ bụrụ na Ticagrelor ntụ ntụ kwụsịrị, dọkịta gị ga - agwa gị mgbe ị ga - amalite iburu Ticagrelor ntụ ntụ ọzọ mgbe ịwachara gị ma ọ bụ usoro ịwa ahụ.
Ewerela ihe karịrị 100 mg n'ụbọchị ọgwụ aspirin mgbe ị na-ewere Ticagrelor raw powder. Ọgwụ a agaghị arụ ọrụ. Soro dọkịta gị kwurịta okwu.
A na-eji ntụ ọka Ticagrelor eme ihe maka igbochi ihe omume thrombotic (dịka ọmụmaatụ strok ma ọ bụ nkụchi obi) na ndị nwere ọrịa ọrịa akwara ọbara ma ọ bụ nkwarụ myocardial na ste elu. A na-ejikọta ọgwụ ahụ na acetylsalicylic acid ọ gwụla ma a na-emechi ya. Enweghi ihe akaebe kachasị elu maka iji Ticagrelor ntụ ntụ tupu ịmịnye akwara ọbara (PCI) na ọrịa na-adịghị ebute ọrịa ST.
Ntuba FDA maka Ticagrelor raw powder bụ ibelata ọnụọgụ nke ọrịa obi, ụdọ mgbochi mocardial (MI), na ọrịa strok na ndị nwere ọrịa akwara ọbara ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke infarction myocardial.
Obere ume ume, isi ọwụwa, dizziness, ọgbụgbọ, na imi nwere ike ime. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a nọgidere ma ọ bụ na-aka njọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ ọkachamara n'ahịa ọgwụ.
Cheta na dọkịta gị edepụtara ọgwụ a n'ihi na ọ kpebiri na abamuru gị dị ukwuu karịa ihe ize ndụ nke mmetụta ndị dị na ya. Ọtụtụ ndị na-eji ọgwụ a enweghị mmetụta dị egwu.
Ọ bụ ezie na eleghi anya, ọbara ọgbụgba dị njọ. Gwa onye dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị oke njọ, gụnyere: mmerụ / ọbara ọgbụgba dị mfe, ọbara ọgbụgba nke siri ike ma ọ bụ na ị nweghị ike ịchịkwa (dị ka nnukwu imi na ị pụghị ịkwụsị), ọbara ọbara / nwa stool, wọọ ya na ọbara maọbụ nke dị ka okpokoro kọfị, ọbara / uhie / pink / ọchịchịrị mmamịrị.
Nweta enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị oke egwu, gụnyere: ngwa ngwa / ngwa ngwa / oge a na-adịghị ahụkebe, nkwụsị.
Ọrịa dị oké njọ nke na-eme ọgwụ a abụghị obere. Otú ọ dị, nweta enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị hụ ihe mgbaàmà ọ bụla nke mmeghachi omume ahụ dị njọ, gụnyere: ọkụ ọkụ, itching / swelling (karịsịa maka ihu / ire / akpịrị), oké ugwoju, nsogbu iku ume.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke mmetụta ndị nwere ike ịnweta. Ọ bụrụ na ịchọta nhụpụ ndị ọzọ edepụtara n'elu, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
Flux Nzuzi nke Ticagrelor
Ticagrelor ntụ ọka Marketing
Esi zụta Ticagrelor ntụ ntụ si AASraw